Warbixinta wax qabadka
U ma baahnid inaad na wargeliso dhaqdhaqaaqaaga
Kumeelgaar ahaan waxaan go`aaminay in aadan u baahnayn inaad na wargeliso dhaqdhaqaaqaaga [aktivitetsrapportering]. Inkastoo ay sidaasi tahay, waxaa lagu soo diri doonaa gunnada aad xaqa u leedahay.
Markii taariikhda ay ku beegan tahay 1-14 luulyo ayaa bilaabi doontaa inaad dhaqdhaqaaqaaaga na wargeliso. Markaas waxaa na wargelin doontaa dhaqdhaqaaqi aad sameeysay bisha juunyo. Waa ku wargelin doonaa markii aad bilaabi doonto wargelinta dhaqdhaqaaqa.
Bil kasta waxaad soo gudbineysaa warbixin ku aaddan waxa aad qabatid. Taasi waa muhiim is aad caawimaad sax ah ugu heshid waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho, iyo si aad kaalmadaada dhaqaale uga heshid a-kassan ama Försäkringskassan. Waxaad warbixinta wax qabadka soo gudbineysaa ugu horreyn 1:da, ugu dambeyna 14:ka bil walba.
Soo gudbi warbixinnadaada wax qabadka
Sidan ayey warbixin soo gudbintu u dhaceysaa
Yaa warbixinta soo gudbinaya?
Adigaaga shaqo la’aanta ah ee nagu ag qoran waa in aad warbixin ka soo gudbisaa waxyaabihi aad qabatay iyo shaqooyinki aad codsatay. Ogawne in haddii aad tusaale ahaan ku jirtid tababar shaqo ama baraaktiig ay sidoo kale khasab tahay in aad soo gudbisaa warbixintaas.
Waxan ayaad warbixinta ka soo gudbineysaa
Waxaad warbixin ka soo gudbineysaa shaqooyinka aad raadsatay iyo wixi kale ee aad qabatay si aad shaqo u heshid. Waxaad ku soo dareysaa waxyaabaha aad qabatid ee qorshahaaga ku jira, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee kuwaas la xiriira. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyin ku aaddan waxa warbixintaada ku jiri kara:
shaqo ama waxbarasho aad codsatay
wareysi shaqo iyo kulan shaqaaleysiin oo aad tagtay
tababar shaqo oo aad codsatay ama aad ku qaadatay
waxbarashada suuqa shaqada
swiidhishka loogu tala galay ajaanibta (sfi)
Sidan ayaad warbixinta u soo gudbineysaa
Way fududahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga dhanka bogayaga intarnatka ama iyadoo loo marayo aabka appen Mina sidor. Waxaad wargelinta hawlaha ka helaysaa boga intarnatka dhanka xiriirka arbetsformedlingen.se ama iyadoo loo marayo in la galo Mina sidor ka dibna la doorto adeega Aktivitetsrapportera.
Si loo isticmaalo adeegan waa inaad ku gasho aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka). Markaad gasho waxaad samayn kartaa:
waxa aad qabatid u qori kartaa si isku xig-xigta, si aadan wax aad qabatay u illoobin
diri kartaa warbixintaada
arki kartaa warbixinnadi aad horay u gudbisay.
Ka fikir inaad kaydiso caddaymaha muujinaya inaad raadisay shaqo. Caddaymahan waa loo baahan karaa haddii lagaa codsado inaad soo bandhigto shaqooyinka aad raadisay.
Haddii aad u baahato inaad soo bandhigto shaqooyinka aad raadisay.
Sidan ayaad macluumaadkaaga u qoreysaa
Haddii aadan kumbuyuutar haysan ama aqoonsi elekteroonig ah
Haddii aadan haysan kumbuyuutar kuu gaar ah ama taleefan caqli leh waad na booqan kartaa, waxaadna isticmaali kartaa kumbuyuutarradeenna.
Haddii aadan haysan aqoonsi elekteroonig ah waxaad warbixintaada ku buuxineysaa foom warqad ah. Foomka waxaad ka soo qaadaneysaa mid ka mid ah xafiisyadeenna.
Ogaw in aad warbixinta wax qabadkaaga ku soo gudbin kartid adigoo na soo wacaya ama e-mail noo soo diraya.
Sidan ayaad ku sameysan kartaa aqoonsi elekteroonig ah
Goormeed soo direysaa warbixinta?
Waxaad warbixinta wax qabadka noo soo direysaa bil kasta marka ay dhammaato ka bacdi. Waxaad warbixinta wax qabadka soo gudbineysaa ugu horreyn 1:da, ugu dambeyna 14:ka bil walba.
Tusaale: Inta u dhexeysa 1 iyo 14 Febraayo waxaad soo direysaa warbixintii wax qabadka ee bishii Jannaayo.
Adigiu waxaad arki kartaa xaalada warbixnaha aad ku soo dirtay dhanka Wargelinta hawlaha meesha ka hooseysa waxyaabaha la soo diray.
Maxaa dhacaya haddii aadan warbixinta soo gudbin?
Haddii aadan warbixinta ku soo gudbin waqtigeeda waxaa lagu siin karaa digniin ama waxaad waayi kartaa lacagti kaaga imaaneysay a-kassan ama Försäkringskassan.
Digniin ama in la waayo lacagta laga helo qasnada shaqo la'aanta
Digniin ama in la waayo lacagta laga helo Qasnada Caymiska
Haddii aad u baahato inaad soo bandhigto shaqooyinka aad raadisay
Markarka qaarkood waxaanu samaynaa kantaroolo si loo baaro inaad raadisay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay wargelinta hawlahaaga.